Mormii fi Ibsa Qeerroo fi Qarree Oromiyaa Irraa Kennname | Kichuu
Posted on March 6, 2019 by fmegersa
Akka odeeffannoo qabnutti bulchiinsi magaalaa Finfinnee poolisii fedraalaa qabachuun manneen daangaa Finfinnee darbuun lafa qotee bulaa Oromoo irraa buqqisan irratti ijaaran dabarsanii jiraattota Finfinneef kennuuf qophiirra jiru.
Mootummaan kuni akkuma kaleessa Oromoo duguuguu baratetti humna waraanaa fayyadamuu barbaada. Qeerron Oromoo lafa teenya diinatti dabarsinee hin laannu.
Qeerron Oromoo guutummaa Oromiyaa bakka jirtanii dammaqinaan qophaa’aa ijaa fi gurra keessan gara Finfinnee deebisaa waan tahu hordofaa.
Dubbiin humnaan dhufti taanan dubbiin tuni tan xumura qabsoo Oromoo taati malee abadan kanaan booda lafa Oromoo irra ilmi alagaa tokko hin qubatuu.
Qeerroo Arsii qophaa’i
Qeerroo Jimmaa qophaa’i
Qeerroo Shawaa qophaa’i
Qeerroo Wallaggaa qophaa’i
Qeerroo Booranaa qophaa’i
Qeerroo Gujii qophaa’i
Qeerroo Harargee qophaa’i
Qeerroo Baalee qophaa’i.
Diina diddee dhufte akka dhufteen keessummeessun ofirraa deebisna.
“IBSA QEERROO FI QARREE OROMIYAA IRRAA KENNAME!!!
“Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen kondomiiniyeemii kuma 52 ta’an daangaa bulchiinsaa isaatii alatti godina addaa Oromiyaatti ijaaraman akka qoodu beeksiseeti jira. “Tarkaanfiin bulchiinsa magaalaa kun aggaammii mastarpilaanii 2ffaatii gadii miti. Qeerroon Oromiyaa gochaa seera-maleessaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kana cimsee akka balaaleffatu beeksisa. “Kanuma waliin walqabatees bulchiinsi magaalattii olaantummaa seeraa Qeerroo fi Qarreen wareegama qaalii kafalaniif akka kabaju kabajaan gaafanna.
“Kun ta’uu didee humnaan manneen koondomiiniyeemii seeraan-ala daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinneen alatti qonnaan bultoota Oromoo buqqisuun ijaaraman keessa namoota kuma 300tti tilmaamaman qubachiisuutti deema yoo ta’e nuti Qeerroo fi Qarreen Oromoo gara tarkaanfii mirga sabaa kabajsiisutti akka deemnu kabajaan isin beeksifna.
“Kunis manneen seeraan-ala dabarfamanii kennamuuf jedhan yeroof to’achuu irraa jalqabee hanga guutuu Oromiyaatti hiriira yaamutti kan deemu ta’a. Kanaafuu kun akka hin taane gama bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin seera kabajuun akka jiraatu kabajaan irra-deebiin isin gaafanna.
“Seerri haa kabajamu!
“Olaantummaan Seeraa hin Cabu!
“Kabajni Qeerroowwanii fi Qarreewwan qabsoo
sabaaf wareegama qaalii kafalaniif!
“Qeerroo fi Qarree Oromiyaaf Humna!
1 thought on “Mormii fi Ibsa Qeerroo fi Qarree Oromiyaa Irraa Kennname”
Berhanu kelbessa on March 6, 2019 at 1:11 pm said:
Nagaa, hubannaaf mirgi isin wajjin haa’ta’u.
“Namni qoonqoo miti qooqa wal-dhaba.” Jedha Oromoon. Jechuun nyaata irrat utuu hin-tain dubbii ykn waligaluu irrat jechu.
Yeroo kana, mo’achuu fii mohatamuun SEERAN ta’uu Kan mul’isu guddinaaf muuxannoo namni goinffatee dha. Waa lama, faallaa, dalagnaan bu’aan nibada.
Mee dhugaa biyya guddatanii keessan kana laala:
Magaallin keessan jiru SEATTLE Kan jedhamtu, guddoon STEETAA tokkoo irraatin gara daqiiqaa kudhan- kudhan- Shan yoo ooftan, kaaba , bahaa, kibbaan magaalota biraa akkum magaala guddaa San bulchiinsa fii baajata ofii qaban qabu.Sanabirra darbee magaalli teessoo bulchitootaa STEETAA, magaala guddaa ykn ‘Seattle’ utuu hin-ta’in magaala xiqaa biraa gara sa’tii qixee makiinan nanatti fudhatuu dha; Innis akkum magaalota kaanii bulchiinsa Maya’s isaa Kan qabu tahee, waajira bulchiinsa of keessat Kan ammate dhaa.
Kana irraa waa hubatama jedhen yaada.
Lammaffaa; Kan biyya yoo laallu akka Serra federaalatti FINFINNEEN Matawan isaa OROMIYAA Jala ta’ee garuu gochii faallaa waan tureef namoonni San akkum seeratti fudhatan fakkaata.
Ammas Oromoon, yoo Kan FINFINNEE tti dhiyoo naannoo OROMIYAA laallata jedhu sirrii tahee, garuu akka magaalicha guddaa Sanaa ala taasise fakkaata.
Inni sadaffaa; Yoo hubanne, Oromoon farda ofii, ganyaas aata’u coollee, randaaf mucuca irrat silaa nanfayyaduu jedhee gad-lakkisee hin deemu. Laallatee, nannawee arkifatee darbee, dirreef/sirrii qaqabu gulufee bakka yaade gaha.
Dhugaan jirtuu, namni FINFINNEE ykn AMERIKA jiru FINFINNEE alatti Maná ijaaru bakkichi magaala guddaa jalatti gala ykn bula serri jedhu hin- eegamu; bahullee hin-fudhatamu.
Kanaaf beektonniif abboitin walii galanii, maqaa fii bakkee dhugaa AKS aadaa uummataa irrat dhaabbaten, bulchiinsa fii baajata mataa ofii, akka dorggommin guddinaaf fidutti mirgi uummataa eegame dalagamuun filanoota baayyee keessaa tokkoo.
Kan biraa, lafti qotee bulaa, garuu lafaa namoonni bitanii gurguraniin madaalame hagas dha, gahaa miti jechuun hin danda’amu. Lafti godoo iyyeessa tokkoo akkaakilee irraa darbee fooqii ykn dhakaa bareedee tuulame baayyee caala.
Sana kan dubbatatu IMMO isa akkaasiti jiraatu miti; isa serrar haqaa dhaabbaten Malee.
Kanaaf, afaan tokkoo dubbachaa walii galu dadhabuu hin barbaachisu.
Jiruu maatii tokkoo, qabeessa/seenaa Maná kutaa tokkoon madaalu fii yaadunis gatii lafaa daadhiif farsoon tilmaamamaa ture irraa fagoo hin ta’uu.